musha Africa Mufudzi Bushiri Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Our Shepherd Bushiri Biography inotaridza Chokwadi nezvenyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mukadzi, Vana, Mararamiro, Net kukosha uye Hupenyu hweMunhu.
Muchidimbu, iyi inyaya yerwendo rwehupenyu hweMuporofita kubva paujaya hwake kusvika paakava nemukurumbira.
Kuti akudze chishuwo chako chenhoroondo yehupenyu hwako, hechino mbereko yake kune yevakuru - pfupiso yakakwana yeBio yaShepherd Bushiri.
Hupenyu hwepakutanga uye Kumuka kweMajuru 1.
Hongu, isu tese tinoziva Malawian Christian Prophet (muna 2020) anonzi vakatiza muSouth Africa pamberi pematare edzimhosva. Zvakadaro, vashoma chete ndivo vanoziva Nyaya yaHupenyu hwaBushiri kubva pakuzvarwa. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Mufudzi Bushiri Wehucheche Nyaya:
Mufananidzo wekutanga waMajor 1.
Kune ekutanga maBiography, mazita ake akazara anonzi Mufudzi Huxley Bushiri. Akazvarwa pazuva re20th raFebruary 1983 kuna baba vake, Huxley Bushiri, uye amai, Christiana Bushiri muLilongwe, guta guru reMalawi.
Nekuda kwechiitiko chakasiyana naAmai vake panguva yekuzvarwa kwake, akawana zita rekuti, Mufudzi.
Kupiwa zita kwaiva nzira yaChristiana yokubvuma kuti Mwari ndiye aiva Mufudzi wake. Muparidzi mwana wechina pavana vatanhatu (4).
Mudiki wekuMalawi Muparidzi akakurira muMzuzu, iri kuchamhembe kweMalawi. Aive mukomana mudiki anonyara.
Iyo young chap yaitevera mai vake kwese kwavaienda. Pa10, Shepherd Bushiri akasangana pamweya. Kusangana ikoko kwaizomutungamira mukuzvipira kutsva uye kufamba mukutenda kwechiKristu.
Mufananidzo wehucheche hwaMufudzi Bushiri.
Mufudzi Bushiri Mhuri Yemhuri:
Hazvina mubvunzo kuti Mufudzi Bushiri anobva kumhuri inotsigira zvikuru chiKristu. Aive mwana wechina pakati peVatanhatu (6) vana vakazvarwa nevabereki vake.
Muporofita pamwe nevabereki vake.
Kuva nemhuri yenyukireya nevabereki nevana vanofanira kunge kwakavapa tarisiro yakanaka kwazvo. Kunyangwe vabereki vaShepherd Bushiri vese vakashanda kuchengetedza kugadzikana kwemari, vaive varombo.
Mufudzi Bushiri Wemhuri Kubva:
Sezvambotaurwa, Muparidzi akaberekerwa muLilongwe, Malawi. Akaberekwa nababa vekuMalawi uye amai vekuZambia.
VaShepherd Bushiri chizvarwa cheMzuzu kuchamhembe kweMalawi. Hupenyu hwake hwekare hunotenderera Mzuzu. Naizvozvo, tinogona kutaura chose kuti muMalawi.
Mepu inoratidza Kwakatanga Mufudzi Bushiri.
Mufundisi Bushiri's Dzidzo:
Kunyangwe kukosha sekudzidziswa kuri, Munhu waMwari akaedza kuwana. Bushiri akaenda kuMoyale Secondary School kuMzuzu, uko akawana SSCE yake.
Akaenderera mberi paTherapon University, St. Thomas, US Virgin Islands, kwaakawana dhigirii rake redzidzo yepamusoro.
Yunivhesiti inzvimbo yeKudzidza Kwepamhepo. Chiratidzo chekutanga ndechekushongedza Muviri waKristu kuHushumiri.
Muporofita anotakura dhigirii rake.
Mufudzi Bushiri's Basa Kuvaka-up:
Nekuda kwechakavanzika chakakomberedza kuberekwa kweMuparidzi weMalawi, anofanira kunge akaona kubata kwakasarudzika pahupenyu hwake. Saka waizoenda nekutsvaga kwakadzika mukati kuti uzviwane.
Shepherd Bushiri pamberi pezita rake.
Mufudzi Bushiri akataura achiona chisikwa chinoshamisa muhope dzake. Paakagamuchira mirairo mukutota, akarairwa kuti audze vanhu kuti vatendeuke. Saka, anoisa hupenyu hwake mukushumira Mwari semuKristu.
Mufudzi Bushiri Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Munguva pfupi yakwana, achienderera kubva mukuzvipira kwake kwekutanga kuti ashumire Mwari, Bushiri akatanga hushumiro hwake. Akatora vakomana vadiki vazhinji kubva kutownship yeZolozolo kuMzuzu ndokuvaita vafundisi ikoko.
Bushiri padanho rekutanga rebasa rake.
Mushure menguva refu, mushure mekutangisa chechi, Bushiri akatamira kuguta guru renyika, Lilongwe. Somugumisiro, akanga asina nguva yakakwana yokugara kana kuti kunyange kushanyira taundi rokumusha kwake.
Akaita zvishamiso zvekuporesa kwakasiyana pamisangano yakasiana-siyana nehondo dzehondo. Kuita uku kwakaita mbiri kuna Bushiri.
Mufudzi Bushiri's Bio - Kubudirira Nyaya:
Pamakore makumi maviri nemanomwe, mwana aimbotya akasimuka semuporofita anozvidaidza. Kuporesa kunoshamisa kwaive kwakafanana kuzita rake. Mbiri yake yakapararira mukati nekunze kweMalawi. Akasiya Malawi achienda kuSouth Africa muna27.
Vanhu vekuSouth Africa vakamutambira nemaoko maviri sezvo ainge atora moyo yavo. Nekuda kweizvozvo, kwakave nekukura kweapo neapo muMinistry, zvese munhamba uye nemari.
Zvekuti kunze kwenhandare kwaaishumira kwaiva nebhanga. Mari yakagamuchirwa yese yakangoiswa kubhengi ipapo ipapo.
Shepherd Bushiri achiratidza kuda kwake Kusingaperi.
Nhasi, ‘muprofita ane simba guru’ ane mukurumbira wokuva munhu waMwari ane uprofita hupfupi.
Ungano dzake dzinopfuura 200,000 XNUMX muSouth Africa neMalawi dzakamuisa pachinzvimbo chakanakisisa chokupesvedzera kuchinja kwezvematongerwe enyika uye zvoupfumi munyika idzi.
Pamusoro paMufudzi Bushiri Wife:
Kusiyana nemupirisita wechikatorike uyo anoramba asina kuroora kweupenyu hwavo hwese, Bushiri akaroorwa naMary Zgambo Bushiri.
Iye anozivikanwa saPorofitakadzi Mary Bushiri uye anoparidza, semurume wake. Aimbove anoshanda seakaunzi accountant musangano repasi rose risiri rehurumende.
Mufananidzo weMurume waBushirir.
Shepherd Bushiri akaroora muna Chikunguru 2011. Muchato uyu wakaitirwa kuMzuzu stadium nevanhu vakawanda. Pamwe chete, vaviri vacho vabereki kuvanasikana vaviri.
Shepherd Bushiri nemukadzi wake.
Hupenyu Hwemhuri hwaMufudzi Bushiri:
Zviri pachena kuti kuuya kubva mumhuri yechiKristu yakadzika midzi kunopa Bushiri mamiriro akanaka pabasa rake raakasarudza muhupenyu.
Imba yake yaive chikamu chebudiriro yake nyaya, kunyanya amai vake. Zvingave here kuti vana vake vachatevera nzira yeUshumiri futi?
Muparidzi weMalawi nemhuri yake.
Nezve Baba vaMufudzi Bushiri:
Baba vaBushiri vaishanda kuMalawi Young Pioneers. Boka iri ibato remauto rinodyidzana nehutongi hwebato rimwe reMalawi Congress Party.
Zita rake anonzi Huxley Bushiri. Uyezve, akaroorwa naChristiana, uyo vane vana vatanhatu naye.
Mufananidzo wababa vaBushiri.
Nezve Amai vaMufudzi Bushiri:
Vese vaiziva Shepherd Bushiri vaiziva kuti mai vake vainge vachinja hupenyu hwake. Zita rake anonzi Christina Bushiri, akaberekerwa kuZambia.
Iye muPresbyterian akazvipira uye inhengo yePresbyterian Church yeCentral Africa.
Mufananidzo waAmai vaBushiri.
Nezve Vana vaMufudzi Bushiri:
Zvakare mhuri yenyukireya, Muporofita weMalawi ane vanasikana vaviri nemukadzi wake. Mwanasikana wavo wekutanga, anonzi Israella, akazvarwa mu2012, apo zita remwanasikana wavo wechipiri ndiRaphaella. Mhuri yevana yakabatana.
Shepherd Bushiri pazororo nevana vake.
Zvimwe Zvizhinji nezveHama dzaMufudzi Bushiri:
Zvakakwana zvakakwana kuti uzive kuti Redfield yaive nevamwe vanin'ina vashanu; uye anofanirwa kuve nemuzukuru (s) nemuzukuru (s), vatezvara vanobatanidzwa. Zvisinei, mazita avo haazivikanwe sepanguva yekunyora uku.
Mufudzi Bushiri Hupenyu hweMunhu:
Vazhinji vateveri vake vakabvunza?… Shepherd Bushiri ndiani? - Muporofita anozviti 'Malawi'.' Kutanga uye pamberi pezvese, iye anokurudzira mukurukuri, munyori, uye muzvinabhizinesi.
Pamberi pemukurumbira wemuporofita unoshamisa, Major 1 vakagamuchira kurairwa kubva kune mumwe muporofita anonzi Muporofita Uebert Angel. Iye zvakare ari multimillionaire muzvinabhizimusi uye Mutungamiriri weGood News Church muUK.
Bushiri nemudzidzisi wake, Ubert Angel.
Izvo, saka, hapana nhau yekuona, Bushiri achiteedzera kugona uye charisma yemupangamazano wake neMutungamiri. Mufudzi Bushiri anoenderera mberi nekupokana nevanhu pasi rose kuti vatevere zvishuwo zvavo muhupenyu.
Mufudzi Bushiri Lifestyle:
Isu tave kuziva Bushiri kuve mumwe wevanhu vakapfuma uye mumwe wevafundisi vakapfuma kwazvo pasirese muAfrica yanhasi. Sekureva kweMalawi Ziso, Mufudzi ane hupenyu hwepamusoro.
VaBushiri vari pamberi pemota yavo.
Mota dzake dzese dzakakosha mari. Ngarava dzake dzinosanganisira Rolls Royce Black Badge, Bentley Bentayga Limited Edition, Aston Martin One -77, uye kunyange Maserati Levante ane kukosha kuri kuita $ 171,500.
Kunze kwengarava dzake dzemotokari, Major One zvakare ane matatu matatu majeti uye dzimba dzinoverengeka dzoumbozha. Imwe yedzimba dzake kuCenturion, Johannesburg. Sekureva kwezuva, ndiye £ 100m jet-setting muparidzi uyo anoti anogona kufamba pamhepo, kurapa cancer uye kusheedza ngirozi.
Haatombotenda kune vaparidzi vanorarama hupenyu hune mwero.
Mari uye NetWorth:
Kubva kubasa rake sebhizimusi manejimendi, anokurudzira kukurudzira, munyori, uye muevhangeri, mambure aBushiri akakosha maererano naGlusea sa2019 anga achifungidzirwa kunge ari $ 150 miriyoni.
Pamusoro pezvo, muchibvumirano, Bushiri akataura kuti iye nemukadzi wake vanowana R722,000 pamwedzi. Mubhadharo wemwedzi nemwedzi wakaenzana ne $ 46,800.
Mufudzi Bushiri Chokwadi:
Tinotarisira kuti wawana ruzivo maererano nehupenyu hwedu hwazvino. Nekudaro, hezvino zvimwe chokwadi iwe zvaungawana zvinonakidza zvakanyanya;
Chokwadi # 1: Kupa zita kupokana:
Pane chirevo chekuti Bushiri akazvarwa saChipiliro Gama. Invoice yakanganisa kuendeswa kuBaloyi Attorneys yaive nezita rakakurumbira Shepherd Bushiri uye pachinzvimbo vakamutumidza kuti Chipiliro Gama.
Chokwadi # 2: Basa rerudo:
Bushiri ave kuita mabasa mazhinji erudo pasi rose, kusanganisira basa kuMalawi, Nicaragua, Nigeria, Botswana, neSouth Africa.
Akaumba sangano rerubatsiro runonzi "Mufudzi Bushiri Foundation" naDuncan Zgambo saMukuru, iye anopa avo vasina mukana.
Prophet Bushiri vanopa R2million yekusimudzira hudiki muLesotho.
Chokwadi # 3: Mubayiro wakakurumbira:
Muna 2018 Shepherd Bushiri akawana mubairo wepamusoro uye kupinzwa muECO Hall yeMukurumbira neAfrican Leadership Magazine. Kambani yake yakawanawo kukudzwa nemubhadharo wehunyanzvi hwebhizinesi nekuenderera kwayo kubudirira.
Chokwadi # 4: Zvizhinji Nezve Yakajekeswa ChiKristu Kuunganidza Chechi (ECG):
Ministry yakashuma seimwe yekereke dziri kukura nekukurumidza muAfrica nepasi rose. Bushiri ndiye akatanga chechi.
Ane machechi akadzikama muSouth Africa, Malawi, Ghana, South Sudan, nedzimwe nyika.
Kuonekwa kwemuchadenga pane mumwe wemisangano yaBushiri.
Basa raBushiri rinounza pamusoro pevane zviuru zana vanoona kuburikidza nechavo terevhizheni nhepfenyuro, pasocial media, uye vapenyu vateereri.
Chokwadi # 5: Chishamiso Kuberekwa:
Vana chiremba vakatozosiya mai Shepherd Bushiri vasati vazvarwa. Sezvo akanga aramba kuvhiyiwa, uko kwaida nokukurumidza.
Vaisatarisira kuti pavakadzokera mumba mwana ange azvarwa. Chakanga chiri chishamiso chaicho! 'Mwari wangu ndiye Mufudzi wangu'– vakadaro amai vaProphet.
Chishamiso kubva pakuzvarwa.
Chokwadi # 6: Akabhadharwa muDare:
Bushiri nemukadzi wake vakaonekwa mudare reSpecialised Commercial Crimes Court muPretoria, chikamu chekupedzisira cha2020. Vese vakapomerwa mhosva yekuba, kubiridzira mari, uye kupokana nekudzivirirwa kweOrganised Crime Act.
Tinotarisira kuti kuverenga nyaya yaPorofita Shepherd Bushiri yehudiki kwave kunakidza uye kukurudzira. Isu takaona matangiro akaita matambudziko kubva pakuberekwa kwake uye nekutevera kuburikidza nekukura uye nehupenyu.
Nekudaro, Muporofita haana kumbobvira akaora moyo, pachinzvimbo akatarisa pakudanwa kwake uye akabudirira ipapo. Izvi zviri kuitika kunyangwe mukutarisana nemiedzo - nguva pfupi yadarika (2020) - Kupomerwa kwaBushiri kwekubata chibharo kwevaungana vaviri.
Ita zvakanaka mukugovana ruzivo rwako nesu. Kunyangwe isu tinokuvimbisa iwe hwakawanda biography chokwadi che Vanozivikanwa vemuAfrica. Kuti uwane pfupiso izere yake Major 1's Bio, shandisa yedu wiki tafura.
Mufudzi Bushiri's Bio Data
Zita rizere: Mufudzi Huxley Bushiri
Zita rekudanwa: Prophet Shepherd Bushiri kana Major 1
Zuva rekuzvarwa: 20th February 1983
Nzvimbo yekuzvarirwa: Lilongwe, Malawi
Basa: Mukristu Muparidzi, munyori, anokurudzira mukurukuri uye muridzi webhizinesi
Dzidzo: Moyale Sekondari, Mzuzu (SSCE) uye Therapon University, US
Baba: Huxley Bushiri
Amai: Christina Bushiri
Mukadzi: Mary Zgambo Bushiri (m. 2011)
Vana: Israella Bushiri (mwanasikana) naRaphaella Bushiri (mwanasikana)
Muhoro: $ 46,800 (pamwedzi)
Net Worth: USD 150 mamirioni (anenge)
Social Media: Twitter (@shepherdbushiri) uye Instagram (@shepherdbushiri)